साँच्चीकै बिचरा बन्दै छ कांग्रेस ? - Sadrishya
साँच्चीकै बिचरा बन्दै छ कांग्रेस ?
संजिव कार्की Apr 09, 2019
प्रसंग विचरा देउवा कै हो , विचरा कांग्रेस कै हो । देउवाको हविगत देखेर ओलीले विचरा कांग्रेस भनेका हुन । हरुवा कांग्रेस संबैधानिक निकायमा भाग पाउन सकिन भनेर रोइलो गर्छ । कठै कांग्रेस ! सारा सत्ता सबै आफ्नै बिर्ता झैँ गर्दा यो स्थिति आउछ भन्ने आकलन गर्ने दुरदृष्टि भएको भए आज यो स्थिति आउदैन थियो ? सम्झना छ कांग्रेसजन ?
आफुलाई मन नपरे पछि पार्टीकै हुन् या विपक्षी जसलाई पनि भित्तामा पुर्याउन खेद्न ,खिस्ट्याउन र खुच्चिङ मच्चाउन असाध्यै सिपालु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खिस्त्ट्याइमा कांग्रेस अक्क न बक्क छ यतिबेला । प्रतिवादको सामान्य कर्म काण्ड झापाली विश्व प्रकासले पार्टी प्रबक्ता हुनुको नाताले धानेको देखिन्छ । ति झापाली ओलीलाई यी झापाली शर्माले मुख अनुसारको मुला भने झैँ ओठे जबाफ चै फर्काउछन र कांग्रेस जनलाई हाम्रो पनि बोल्ने मान्छे छ है भन्ने ढाडस मिल्छ । यसो राहत मिल्छ चहराएको घाउमा कामले दिनु पर्ने जबाफ मुखले दिएर कांग्रेसको कर्म काण्डमा धुप हाल्दैछन विश्व प्रकास शर्मा।
शर्मा जस्ता अरु केहि छन् र कांग्रेस छ कि भन्ने सुनिन्छ यदाकदा । बौरिन नसकेको कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई मुख फर्काउन चै आफ्ना केहि नेता मार्फत यसो प्रयत्न गर्छ । केहि दिन अघि प्रधानमन्त्री के पी ओलीले कांग्रेसलाई होच्याएर , खिज्याउदै बोले बिचरा कांग्रेस ! हुनत देसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीको बोली आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमा लायक होइन र अभिभावकले बोल्ने त्यो भाषा र त्यो तुच्छता होइन तर हाम्रा प्रधानमन्त्री भट्टीमा बसेर बोले झैँ सार्वजनिक मन्चबाट पार्टीहरुलाई लल्कार्छंन , दुत्कारछन् । केहि हप्ता अघि विप्लव भन्ने पार्टीको हुर्मत लिए सी के रावतलाई अंगालोमा बेरेर भलै विप्लवका हर्कत भ्रत्सना योग्य छन् यद्दपि प्रधानमन्त्री आफैले त्यति गति छाडेर नबोले पनि हुन्थ्यो , हनुमानहरु नै काफि थिए बिप्लवको सातो बोक्न तर कुनै मदिरा प्रिय मान्छे मदिराको सुरमा बर्बराए झैँ गरी प्रधानमन्त्री आफै प्रस्तुत भए उपयुक्त भावभंगिमा ।
आफ्नै पार्टीका नेता भीम रावल , घनश्याम भुसाल ,जगन्नाथ खतिवडा , रामकुमारी झाक्री , ठाकुर गैरे जस्ता चर्चित नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री आफ्नो जस्तो लाग्दैन अरु विपक्षी जैरेलाई के लागोस ? दुई तिहाईको तागतले प्रधानमन्त्रीमा पैदा भएको दम्भ र अहंकार शायद अहंकार शब्दलाई नै लज्जा हुने त छैन ? अठचालिस सालको बहुमत सरकार चलाउदा गिरजिाप्रसाद कोइरालामा पनि दम्भ र अहंकार थियो जसको परिणाम उनले त्यतिबेलै केहि समयको अन्तराल भनौ मध्यावधि चुनाव २०५२ मा नमाज्जाले चाखेका थिए । आज गिरिजाले चाखेको कांग्रेसले ब्योहोरेको त्यो नियति नेकपा र ओलीले व्योहोर्नु पर्छ यो लेखको त्यो आशय होइन बरु त्यो दुखदायी अतितबाट शिक्षा लिनु उचित र बुद्दिमानी हुन्थ्यो। आफै परेर चेत्नु भन्दा अर्काको देखेर चेत्नु सच्चिनु र गलत बाटो नहिड्नु बुद्दिमानी हुन्थ्यो l देश कसैले पनि नदुखाई दिए बेस हुन्थ्यो । पार्टी प्रणालीमा पार्टी दुख्दा , टुट्दा र भत्कदा देश दुख्दो रैछ , पार्टी चोइटिदा जनताको मर्ममा शुल पर्दोरैछ । पार्टी यो या त्यो जुन बिग्रे भत्के पनि जनताको सपना र भाग्य भविष्यमा धाजा फाट्दो रैछ । देशले पिडा बोक्दो रैछ । देश दुखाउने नियति दोहोरिनु सामयिक हुन्न । देश दुखाउन ओली , देउवा या अरु कसैले पनि दुष्प्रयास नगरुन ।
प्रसंग विचरा देउवा कै हो , विचरा कांग्रेस कै हो । देउवाको हविगत देखेर ओलीले विचरा कांग्रेस भनेका हुन । हरुवा कांग्रेस संबैधानिक निकायमा भाग पाउन सकिन भनेर रोइलो गर्छ । कठै कांग्रेस ! सारा सत्ता सबै आफ्नै बिर्ता झैँ गर्दा यो स्थिति आउछ भन्ने आकलन गर्ने दुरदृष्टि भएको भए आज यो स्थिति आउदैन थ्यो हगी ? सम्झना छ कांग्रेसजन ? अकन्टक सत्ता संचालन बहुदलीय परिपाटमा जनताको रुचि र चाह हुन्न । प्रचन्डलाई स्याबासी र दण्ड यहि प्रणालीमा सम्भव भएको हो । कांग्रसलाई पुरुस्कार र दण्ड यहि पद्दतिकै कमाल हो ल ओलीले पाएको स्याबासी घमण्डको यहि रफ्तार रहिरहने हो भने अब चार वर्ष पछि विचरा ओली भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न तसर्थ सत्तान्धहरु हो याद गर घमण्डले फुलेको धेरैलाई धेरै पटक देखियो तर फैलिएको देख्न सकिएन तसर्थ घमण्ड छोड्ने हो कि ?
सत्ता देसको मात्रै होइन पार्टीको पनि हुन्छ । पार्टी सत्तामा सधै बसिरहने मृत्य पर्यन्त रहिरहने मनशाय पाल्दै जानेहरु पनि सत्ता च्युत बनेर सधैको विचरा बन्ने दिन किन निम्त्याउने ? शेरबहादुर देउवा ज्यू पार्टी सत्ता सधै एक व्यक्ति र परिवारको पेवा हुनुहुन्न भनेर कोइराला वंशसँग भिडने तपाई किन आज आफ्नै प्रिन्सिपललाई लत्याएर पार्टी आफ्नो बिर्ता सम्झने भुल गर्दैहुनुहुन्छ ? हिजो गिरजाप्रसादले छोरी सुजातालाई पार्टीमा आकस्मिक पदोन्नति दिंदा परिवारवाद देख्ने तपाईका आँखा आरजुम्यामलाई संसद बनाउन लाग्दा किन अन्धा भए ? सुनिन्छ २०४८ पछि जब तपाई राणा साहेबको जुवाई बन्नुभयो तब देखि तपाइले आफुलाई कांग्रेस भन्दा बढी राणा सम्झन पुग्नु भएको दृस्टान्त कांग्रेसहरु सुनाउछन् ल आफ्ना कार्याकर्तालाई धेरै माया र संरक्षण दिने तपाईको अभिभावकत्व अहिले आफ्ना ससुराली खलक तिर सर्यो फलस्वरुप आफ्नै जिल्ला डडेलधुराका पार्टी सभापतिको समेत साथ रहेन ।
देशभरका झन्डै साठी प्रतिशत जिल्ला सभापति तपाइले लिनु भएको नीति र शैलीको विपक्षमा रहेको कुरा कांग्रेस सभापतिहरुको भेलाले पुष्टी गरेको छ । पार्टी सभापतिको रुपमा तपाई सिंगो शरीर हो भने त्यसका अत्यावश्यक अवयवहरु जिल्लाका पार्टी सभापति र कार्यकर्ताहरु हैनन् र ? साठी प्रतिशत अवयव शरीरसँग फंक्सन गर्न रुचि राख्दैनन् भने त्यो शरीर कस्तो हुन्छ ? बाँकी अवयव पनि सहि सलामत छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन उल्टै पार्टी सभापतिहरुलाई कार्यबाही गर्ने धम्कि ? तपाई कसको सभापति देउबा ज्यू ? अपांग शरीर बनाउने अवयवलाई औषधि मुलो गरेर ठिक ठाउमा ल्याउने कि रोग लागेको जति सब काटेर फालिदिन्छु जति ठिक छन् ती बाट काम चलाउछु जीवन धान्छु भन्ने सोच राख्ने ? चार चार पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको मान्छे अब पनि ज्योतिषकै भनाइमा लागेर प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो सपनाको च्याखेमा पार्टीलाई घाटामा पुर्याउन मिल्छ र ?
पार्टीमा न्याय र समान अवसरको समुचित वितरणको वैज्ञानिक मापदण्ड कायम गर्न सकिएन भने पार्टी दुर्घटित हुने सम्भावना सधै रहन्छ । एकै व्यक्तिलाई मात्र बारम्बार अवसर प्राप्त हुने अनि अरु चै सधै भर्यांग मात्रै बनिदिनु पर्ने भए पछि पार्टीमा कोहि किन लाग्छ ? पार्टीमा लाग्नेहरुलाई समान अवसर र आकर्षक मुद्दाको आवश्यक हुन्छ खै त्यो कांग्रेस पार्टीमा ? कांग्रेस पार्टीको मौलिकता खै ? कुन मुद्दा र कुन विचारले कांग्रेसमा लाग्ने ? अरुको भन्दा छुट्टै र बेग्लै यूगजनित मुद्दा खै कांग्रेससंग ? कम्युनिस्टको असफलता नै आफ्नो सफलता देख्ने कांग्रेसको सुस्त चेतको कारण कांग्रेस बलियो हुन नसकेको हो । तपाईहरुलाई थाह छ कांग्रेसले पन्ध्र साल र २०४८ सालमा आफ्नो बुताले आफ्नो सिद्दान्तले चुनाव जितेको हो नत्र अरु चुनावी जीत र विजय कम्युनिस्ट बेमेल र अनेकताले मात्रै कांग्रेसले प्राविधिक रुपमा जितेको हो ? समिक्षा गर्नु भएको छ यसरी कहिल्यै ? गलत बाटो हिडे पछि घन्टौ , हप्तौ र महिनौ र वर्षौ दौडे पनि गन्तव्यमा पुगिन्न्न । कांग्रेस बिना गन्तब्य हिडेको छ ।
हिडेको छ कसरी भनौ चुनावमा पराजयको झापड खाए देखि कोमा बाट बेडमा सरेको छ तर उठेर हिड्नसकेको छैन त्यसैले प्रधानमन्त्री विचरा कांग्रेस भनेर खिज्याउछन । यहाँ पार्टीको मुली हुनुको नाताले पहिलो विचरा देउवा हुन अनि अरु पदाधिकारी र क्रमश बिभिन्न निकायका जिम्वेवारी बोकेर बस्ने वार्ड तह सम्मका नेतृत्व । जयनेपाल दाइ भनेर सधै परिक्रमा गरेर बस्ने , आफ्नो स्थान र निकाय भुल्ने चाकरीबाज धुपौरे कांग्रेस हुन विचरा ! भए जति र पाए जति सबै अवसर आफै लिने भोट हाल्ने समयमा मात्र कार्यकर्ता , शुभेच्छुक र जनता सम्झने कांग्रस हुन विचरा ! गृह कलहको फन्दामा नराम्रो सँग फसेको दुब्लो , निरिह प्रतिपक्ष भएको कारण पनि सरकारलाई हाइ सन्चो छ । प्रतिपक्ष कहिँ छैन भएको पनि आफै भित्रको लडाइ झगडामा व्यस्त छ सरकार ढुक्क छ अर्कोपटक पनि टक्कर दिन कोहि तयार छैन अनि किन दौडन पर्यो सरकार ? जनाधार नभएकाहरु अनि पैसा मात्रै भएकाहरु अहिले शेरबहादुरको लागि असली कांग्रेस छन् ।
शेरबहादुरको ब्यबहार देख्दा, उनको हप्कीदप्की र दम्भ देख्दा लाग्छ उनी मालिक हुन् अरु नेता कार्यकर्ता उनका हरुवा चरुवा , हलि गोठाला । स्वामीभक्त कार्यकर्ता आफ्ना नेताको मर्जिलाई दिव्यवाणी सम्झन्छन । कांग्रेस कार्यकर्तामा हुने र नहुने हरुको दुई तहको मनोविज्ञान छ यहि मनोविज्ञानमा खेल्छन र पार्टी कार्यकर्तालाई रण भुल्लमा पार्छन कांग्रेस नेतृत्व । कार्यकर्ता तहबाट देशभर खुल्ला नेतृत्व चुन्ने प्रणालीमा जाने हो भने गगन , विश्वप्रकाश , धनराज लगायत नयाँ पुस्ताको हातमा पार्टी जान्थ्यो तर अहिलेकै प्रणालीबाट नया पुस्तामा नेतृत्व सर्दैन यो पुस्ताले नेतृत्वमा पुग्न दाँत सबै झरीसक्नुपर्छ । फेरि पनि उही पुरानै प्रवृति तर नयाँ अनुहारले पार्टीको कुर्सीमा आफुलाई टास्ने छ l आफ्नो पहिचानमा पुनरावृति भएन मौलिकता जोगाएन भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षबाट पनि खस्कदै , प्रतिपक्षी हुदै थोरै सिट, नगन्य सिट जित्ने एतिहासिक पार्टीमा रुपान्तरण हुनेछ , देउवाहरु विचराबाट झन् विचरा हुनेछन शेरबहादुर र समग्र कांग्रेसको रवैया यस्तै रह्यो भने ओलीले पनि आफु विचरा बन्ने पालो नपाएसम्म यसरी नै होच्याउने छन् विचरा कांग्रेस ! खिज्याउने छन् कठै कांग्रेस ! पार्टी बिग्रियो नेताले बुद्दि पुर्याएनन भने कांग्रसको हाल हुनेछ भनेर उदाहरण दिनेछन । नयाँ पुस्ताले घत मानी मानी कांग्रेसको इतिहास र इतिवृतान्त पढ्नेछन र समय चेत ग्रहण गर्नेछन ।